ရင်ခွင်မဲ့ပန်းတို့၏နားခိုရာ | Dwave
Home ရေးရာကဏ္ဍ အမျိုးသမီးရေးရာ ရင်ခွင်မဲ့ပန်းတို့၏နားခိုရာ
Posted By: D Waveon: October 16, 2017 In: အမျိုးသမီးရေးရာ, ရေးရာကဏ္ဍNo Comments
ပန်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ လှပစွာဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းခင်းကြီးထဲကပန်းတွေကိုပဲ မြင်ယောင်မိကြမှာပါ။ ပန်းပွင့်ချင်း တူခဲ့လျှင်တောင် ရှင်သန်ကြီးထွားပုံ ကွာကြသေးတာပဲ။ အဲဒီလိုပါပဲ၊ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေကို ပန်းလေးတွေနဲ့ တင်စားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ ကလေးလေးတွေ (ပန်းလေးတွေ)ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တွယ်တာစရာ ရင်ခွင်မဲ့တဲ့အခါ ရင်ခွင်မဲ့ပန်းလေးတွေ၊ အရိပ်မဲ့ပန်းလေးတွေ အဖြစ် တင်စားပါရစေ။ အဲဒီ ပန်းလေးတွေကို မေတ္တာတရားနဲ့ နားခိုခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရင်ခွင်မဲ့ပန်းတို့၏ နားခိုရာအဖြစ် ကျွန်မ တင်စားပါရစေ။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိူင်ငံတော်၊ မြန်မာနိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ နေပြည်တော်က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုကို ကျွန်မညီမလေး တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းခေါင်းစဉ်က မွေးကင်းစကလေးစွန့်ပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး နည်းပြသင်တန်းလို့သိရပါတယ်။ သင်တန်းကာလမှာ( ၂၈. ၈. ၂၀၁၇ မှ ၃၁. ၈. ၂၀၁၇ ) အထိဖြစ်ပါတယ်။ နိူင်ငံတော်အစိုးရကကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ပွဲလေးမို့ သင်တန်းသား/သူတွေကို နေရေး၊ စားရေးကအစ စီစဉ်ပေးပြီး အကုန်အကျခံ ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးပါ။ သင်တန်းကာလပြီးဆုံးလို့ ညီမလေးပြန်ရောက်လာချိန်မှာ သင်တန်းအကြောင်း၊ နေရေး၊ စားရေးတွေအကြောင်း မေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းအကြောင်းအရာတွေက အတော်ကိုစုံပါတယ်။ သူပြောပြသမျှထဲမှာ ကျွန်မ စိတ်အဝင်စားဆုံး အရာက သူတို့ သင်တန်းသား/သူတွေ လေ့လာရေးသွားခဲ့ရတဲ့ စမတောင်ပေါ်က မဟာပရဟိတလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ်လေး အကြောင်းပါ။ သူ့ဆီကရတဲ့ စမတောင်ပေါ်က လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ် ဆိုတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြု့စု့ပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်တွေ၊ ဒီကျောင်းလေးက ဘွဲ့ရပြီး ဒီကျောင်းမှာပဲ ပြန်အလုပ်အကျွေးပြု့နေတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမလေးတွေကို လေးစားစိတ်က ဒီဆောင်းပါးကိုရေးဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မရောက်ခဲ့ရတာမို့ လက်ကမ်းစာစောင်ပါ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပါရစေ။ မဟာပရဟိတလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ်လေးကို (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ်မှာ စမတောင် ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝိမလနှင့်ဘဒ္ဒန္တဥာဏိန္ဒ(ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုဆရာတော်) တို့မှ ဘဝချို့တဲ့နေသော ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များအား ပြု့စု့ပျိုးထောင်ပေးရန်ရည်ရွယ်၍ ကလေးငယ်(၄)ဦးနှင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်လှစ်ပြီး တစ်လအတွင်းမှာပဲ ကလေးငယ်(၂၅)ဦးအထိ တိုးလာပါသည်။ ယိုင်နဲ့နဲ့ဝါးတဲလေးနှင့် စတင်အစပျိုးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ထိုစဉ်က ကလေးများ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး အစရှိသော လှုမှုစောင့်ရှောက်ရေးတွင် အခက်အခဲများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ယိုင်နဲ့နဲ့ ဝါးကျောင်းလေးတွင် အနေဆင်းရဲခဲ့၏။ ဆွမ်းမပြည့်စုံသဖြင့် အစားဆင်းရဲခဲ့၏။ ပညာသင်ကြားရေးတို့တွင်လည်း မပြည့်စုံခဲ့ပေ။ ထိုအခက်အခဲများကြားမှပင် ဆရာတော်နှစ်ပါးသည် ကလေးများအား ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းမှကလေးများအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများနှင့် လယ်တဲ၊ ယာတဲများမှ ပညာသင်ကြားရန် အခက်တွေ့နေသော ကလေးငယ်(၁၀၀)ဦးခန့်ကိုလည်း နေ့လယ်စာ ထမင်း၊ ကျောင်းဝတ်စုံမှအစ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ပညာသင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ကွန်ပျူ တာပညာနှင့် စက်ချုပ်ပညာများ ကဲ့သို့သော အသက်မွေးမှု ပညာများကိုလည်း သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ အသက်မွေးမှုပညာများနှင့် မူလတန်းမှ သတ္တမတန်းအထိ ထိုကျောင်းမှ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော ဘွဲ့ရနှင့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသား/သူ များကပင် ဆရာ၊ ဆရာမ များအဖြစ် ပြန်လည်သင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်တန်းအဆင့်ပညာကို သာဝတ္ထိ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက်တက်ရောက် ပညာသင်ကြားစေခဲ့သည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ သွားရေး၊ ပြန်ရေး အဆင်ပြေစေရန် စက်ဘီးများစီစဉ်ပေးထားသည်။ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု့အတွက် ချမ်းသာသု့ခဆေးရုံမှ ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဝင်း၊ ဆေးမှူးဦးကျော်မိုး၊ သူနာပြုဆရာ ဒေါ်နော်အဲပလင်းတို့မှ မေတ္တာဖြင့် စောင့်ရှောက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။
ယခုအခါ ကျောင်းတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသူ(၆၆၄)ဦး ရှိပါသည်။ ဘွဲ့ရ(၂၆)ဦး ရှိပါသည်။ နှစ်လသားအရွယ်မှ (၂)နှစ်သားအရွယ်အထိ ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးငယ်(၆၆)ဦးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသည်။ မဟာပရဟိတကျောင်း၏ တစ်နေ့စာကုန်ကျမှု့မှာ ဆန်(၇)တင်းခွဲကျော်၊ ဆီ(၅)ပိဿာကျော်ဟု့ သိရပါသည်။ တစ်နေ့တာ အာဟာရဒါန ပြုလိုသူများအနေဖြင့် (၉၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လှူ ဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ အဝတ်အထည်၊ ပညာသင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများနှင့် ပြဋ္ဌန်းစာအုပ်များကိုလည်း မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှ လှူ ဒါန်းနိုင်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအားစောင့်ရှောက်ခြင်း ပရဟိတလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဆရာတော်(၂)ပါး၏မေတ္တာ၊ အလှူ ရှင်များ၏ သဒ္ဓါတရားများကြောင့် ယခင်ကလို ဝါးကျောင်းကလေးမဟုတ်တော့ပဲ အခိုင်အမာ အဆောက်အဦးများဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုးဝေစည် လာခဲ့ပါပြီ။ သို့သော် များပြားလာသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားဦးရေ အနာဂတ်တွင် ဖော်ဆောင်မည့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်မြင့်ပညာများ ဆက်လက်သင်ကြားရေးတို့အတွက် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေသေးပါသည်။
(စွန့်ပစ်ကလေး)ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကြားရရုံနဲ့ ရင်နင့်အောင်ခံစားရပါတယ်။ မလိုချင်သူတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေရာမျိုးစုံမှာ၊ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ စွန့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ မကျွေးနိုင်၊ မမွေးနိုင်တာကြောင့် စွန့်ပစ်တတ်ကြသလို ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု့တွေကြောင့်လည်း စွန့်ပစ်ဝံ့ကြတာပါပဲ။ ဘယ်လိုအမှားမျိုးကိုမှ မကျူးလွန်ရပါပဲ လူ့လောကကိုဝင်ခွင့်ရတယ် ဆိုလျှင်ပဲ စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ နို့ဘူးတိုက်အရွယ် ကလေးလေးတွေ၊ အခန်းထဲ လူဝင်လာရင် ချီဖို့လက်ကမ်းနေကြတဲ့ တစ်နှစ်သားအရွယ် ကလေးလေးတွေ၊ တစ်ယောက်ကိုချီလျှင် ကျန်တဲ့ကလေးတွေကပါ လက်ကမ်းပေးပြီးချီခိုင်းကြတာ၊ ချီတဲ့လူက ချပေးလိုက်ပြီး ပြန်ဖို့ပြင်ရင် ငိုကြတာ ကြားရတဲ့ကျွန်မတောင် ညီမလေးအပြောကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့သူ ငိုမိတယ်ဆိုတာကတော့ ပိုတယ်ဆိုစရာ မရှိပါဘူး။
ရင်ခွင်မဲ့ခဲ့ရတဲ့ ဒီလိုကလေးလေးတွေအတွက် မဟာပရဟိတလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ်လို ကျောင်းတွေရှိနေခြင်းကပဲ နိုင်ငံတော်အတွက်၊ ကလေးလေးတွေအတွက် များစွာ ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ ရင်ခွင်မဲ့ပန်းလေးတွေ အတွက် အရိုင်းဆန်ဆန် လေလွင့်ကြရမဲ့ ဘဝကနေ စေတနာကြီးမားစွာ ကူညီကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ မဟာပရဟိတလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဆရာတော်(၂)ပါးရဲ့ မေတ္တာတရားက ကြီးမားလွန်းပါတယ်။ ဘဝလမ်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တတ်စေရန် ပညာသင်ကြားပေးရုံသာမက သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတွေကိုပါ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ပြီး ဘဝကိုရဲရင့်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အထိ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေက ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို (၁၀)တန်းမပြီးခင် သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ခွင့်မပေးပါဘူး။ အကြောင်းက ငယ်တုန်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီး အရွယ်ရောက်လို့ လူဝတ်လဲချင်တဲ့အခါ ပညာအခြေခံနည်းတဲ့အခါ ဘဝမှာ ရပ်တည်ဖို့ အခက်တွေ့မှာစိုးလို့ပါဆိုတဲ့ အဖြေက ကျွန်မတို့ သာမာန်အတွေးနဲ့ မတွေးမိတဲ့အရာပါ။ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့ ဘဝလက်တွဲဖော်ကို တွေ့တဲ့အခါ မင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုပါ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ ကြားရချိန်မှာတော့ ကျွန်မအံ့သြဝမ်းသာမိပါတယ်။ မိဘရင်ခွင်လိုနွေးထွေးမှု့၊ ကြင်နာမှု့တွေနဲ့အတူ ပြု့စု့စောင့်ရှောက်မှုတွေက ကလေးတွေရဲ့ ဘဝကိုလုံခြုံ ချမ်းမြေ့စေပါတယ်။
နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင် အေးမြတဲ့ မေတ္တာရိပ်မှာ ခိုလှုံခွင့်ရတဲ့အတွက် အားငယ်စိတ်တွေနဲ့ အထီးကျန်မဆန်ပဲ ဘဝတူသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ သူတို့ဘဝလေးတွေ ထင်သလောက် မခါးခဲ့ကြဘူးလို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ ဆရာတော်(၂)ပါး၏ မေတ္တာတရားကြီးမားမှု့ကြောင့် ရင်ခွင်မဲ့ပန်းလေးတွေ ငွားငွားစွင့်စွင့်နဲ့ ဖူးပွင့်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ရင်ခွင်မဲ့ပန်းပေါင်းများစွာအတွက် ခိုလှုံရာအရိပ် တစ်ခုကို စေတနာ၊မေတ္တာ၊ဂရုဏာပေါင်းများစွာနဲ့ ထု့ဆစ်ပုံဖော် ဖန်တီးခဲ့သော မဟာပရဟိတလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ်လေး ထာဝရတည်တံ့ပါစေ။
၁၆.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် ဒီလှိုင်းစာစောင်